Saamaynta Saalax Badbaado oo is Qarxiyey, uu ku Reebay Shacabka Reer Muqdisho & Xildhibaanada (Video) | Entertainment and News Site
Home » News » Saamaynta Saalax Badbaado oo is Qarxiyey, uu ku Reebay Shacabka Reer Muqdisho & Xildhibaanada (Video)
Saamaynta Saalax Badbaado oo is Qarxiyey, uu ku Reebay Shacabka Reer Muqdisho & Xildhibaanada (Video)
daajis.com:- Kadib markii magaalada Muqdisho, gaar ahaan nawaaxiga Garoonka Aadan Cadde uu isku Qarxiyey Saalax Badbaado oo horey usoo noqday Xildhibaan ayaa waxay sababtay in laga cabsado Xildhibaanada Baarlamaanka wakhtgiisa sii dhamaanaayo.
Dadka magaalada Muqdisho, ayaa markii ay maqleen wararka sheegaya in Xildhibaan hore uu is qarxiyay, ayaa waxa ay bilaabeen inay ka cabsadaan Xildhibaanada iminka shaqeeya, Waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in xildhibaanada qudhooda ay iska kala shakinayaan ayna kala cararayaan, sababo la xiriiro in midkood uu is‐qarxiyo.
Shacabku waxa ay qabaan inay dhici karto in fal ceynkaasi ah ay fuliyaan Xildhibaanada iminka xilka uu kasii dhamaanaayo, maadaama Xildhibaankii hore uu ahaa mid da’ ah.
Hadal heynta ugu badan ayaa ah in Xildhibaanada iminka jira ay ku dhex jiri karaan kuwo la shaqeeya maleeshiyaadka Al‐shabaab kuwaasi oo loo adeegsan karo weerarada soo socda. Xildhibaanada qaar ee ka tirsan Baarlamaanka ayaa waxaa lagu xantaa inay xiriir la leeyihiin Al‐shabaab, taasina ay suuragalinkarto in maleeshiyada Al‐shabaab ay u fududeeyan howlo badan ka hor inta aysan kuraasta Baarlamaanka baneyn.